Kedu ihe Web Scraping? Top 10 Akwụkwọ Ọbá Akwụkwọ Python - Ọkachamara Ọkachamara
Nchịkọta weebụ bụ ụzọ dị irè isi nakọta ozi sitere na intaneti. Usoro nchịkọta weebụ na-enweta Web Wide Web site na iji Protocol Transfer Protocol, na-anakọta data site na saịtị dị iche iche, ma gbanwee ya n'ime ụdị nke a pụrụ ịdabere na ya.Bots na-arụ nnukwu ọrụ na nchịkọta data na ntinye. Ha na-enyere aka chekwaa ọdịnaya n'ime ihe nchekwa data dị iche iche maka iji ọrụ ntanetị.
A na-ewuli ibe weebụ site na iji asụsụ mmemme dị iche iche dịka HTML na XHTML. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji mepụta usoro dị iche iche maka ntanetị weebụ ma dabere na nchọpụta DOM, ọhụụ kọmputa, na nhazi asụsụ iji mee ka omume ụmụ mmadụ dị mfe. A na-ewere nchịkọta data dị ka ụzọ adhoc na usoro siri ike, ma ọ bara uru maka ụlọ ọrụ, mmemme, ndị na-abụghị coders, webmasters, ndị nta akụkọ, ndị ahịa na-ere ahịa na ndị na-ede akwụkwọ.
A scraper web bụ API nke na-enyere aka wepu ozi site na saịtị dị iche iche. Ndị ọrụ dị ka Google na Amazon na-enye ọrụ ntanetị weebụ na ngwá ọrụ dị iche. Ụdị weebụ ntanetị ọhụrụ bụ ntanetịime data, ntanetị RSS, ntanetị Twitter, na nri ATOM. JSON na CSV na-eji dịka ọrụ nchekwa nchekwa n'etiti sava weebụ na onye ahịa. Onwa, Bubata. Ee, Kimono Labs na ParseHub bụ ndị a ma ama ngwa ngwa ntanetị weebụ . Ha na-abia ma n'efu ma kwụọ ụgwọ ụgwọ ma nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ maka gị. Ozugbo ebudatara ma wụnye, ngwá ọrụ ndị a nwere ike ibelata ọtụtụ narị ibe weebụ n'otu awa.
Top 10 Ụlọ akwụkwọ Python maka ntanetị weebụ:
Eke Ọgba bụ asụsụ mmemme dị elu. Ọ na-egosipụta usoro dị ike na njikwa nchekwa nchekwa. Eke Egwuregwu na-akwado ụdị usoro ihe omume dị iche iche, dịka ịme ihe, ọrụ, usoro na ihe dị oké mkpa. O nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọbá akwụkwọ mara mma, ma a na-akọwa ụlọ akwụkwọ Python a ma ama kachasị elu.
Arịrịọ bụ akwukwo ogbaaghara Python HTTP nke na-elekwasị anya na mmekọrịta nke weebụsaịtị dị iche iche. Ọ nwere ike ijikwa kuki, debe usoro ndekọ, ma jikwa saịtị ndị dị ala ma ọ bụ mee ogologo oge ịzaghachi. License Apache2 nyere ya ikikere, ihe mgbaru ọsọ nke arịrịọ bụ iziga arịrịọ HTTP n'ụzọ enyi na nke zuru oke.
Ọgwụ bụ ihe ntanetị weebụ nke na-enyere aka wepu ozi bara uru site na weebụsaịtị.
SQLAlchemy bụ ebeabụ data nchekwa nke bara uru maka ndị mmemme na ndị mmepe weebụ.
Ọbá akwụkwọ a HTML na XML bara uru maka freelancers na webmasters.
Ọ bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na akwụkwọ XML na HTML. Ọ na-enyere aka nyochaa ndị na-achọ XPath na CSS ma chọta ihe ndị kwekọrọ na net.
Ụlọ akwụkwọ Python a na-enyere aka rụọ ọrụ nke 2D egwuregwu.
Ọ bụ ihe ngosi 3D dị ike na ihe eji eme egwuregwu, nke a ma ama maka interface enyi ya.
8. Nltk (Egwuregwu Ngwá Ọrụ Egwuregwu)
Ọ na-enyere aka iji ụdọ dị iche iche rụọ ọrụ ma nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ na oge.
Nose bụ ule nyocha maka Eke Ọgba nke ọtụtụ narị ndị mmemme na ụwa nile jiri.
Site na SymPy, ị nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ na nyochaa ogo ọdịnaya weebụ gị Source .